Semalt: तपाइँको साइट को लागी WordPress प्लगइन - शीर्ष सल्लाह
WordPress विषयवस्तुहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रकारका शानदार वेबसाइटहरू निर्माण गर्न यो सम्भव बनाउँदछ। यद्यपि डिजाइन प्रक्रियाले उत्तम विषयवस्तु रोज्न धेरै गाह्रो बनाउँछ। भाग्यवस, अब यो पुस्तकालयलाई फ्रि वा प्रीमियमको तार्किक कोटीहरूमा, र एकल उद्देश्य वा बहुउद्देश्य विषयवस्तुहरूमा तोड्न सम्भव छ।
ओलिभर किंग, Semalt का एक धेरै अनुभवी विशेषज्ञहरू, लेखमा तपाईलाई यस सम्बन्धमा सहयोगी विवरण प्रदान गर्दछ।
नि: शुल्क र प्रीमियम WordPress थीम बीच भिन्नता
WordPress तपाइँको वेबसाइट को लागी आधार बनाउन मदत गर्दछ। उत्कृष्ट वर्डप्रेस विषयवस्तुले तपाईंको साइटलाई तपाईंको रुचि अनुकूलित गर्न सजिलो बनाउँदछ। केवल एक छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँको डिजाईन सूट गर्दछ। कुन विकल्पहरू उपलब्ध छन् बुझ्नु आवश्यक छ।
नि: शुल्क वर्डप्रेस थिमहरूका पेशेवरहरू र विपक्षहरू
नि: शुल्क वर्डप्रेस विषयवस्तु ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयुक्त छन् जससँग बजेट छैन अझै वेबसाइट समाधानहरू खोज्दैछन्। नि: शुल्क विषयवस्तुहरू परिभाषाको आधारमा विकासकर्ताहरूको लागि कुनै नाफा उत्पादन गर्दैनन्। विकासकर्ताहरु यसैले स्वतन्त्रता मा छैन, केहि केसहरु मा, समर्पित समर्थन वा आफ्नो प्रयोगकर्ताहरु को लागि नियमित अपडेट प्रस्ताव गर्न। परिणाम यो छ कि यो सुरक्षा जोखिम को लागी वेबसाइट कमजोर छोड्छ।
त्यहाँ धेरै नि: शुल्क विषयवस्तुहरू छन् जुन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्। जे होस् ती बिक्रीका लागि छैनन्, दिमागमा 'खरिददार होशियार' फ्रेम राख्नुहोस् र कुन वेबसाइटहरू तपाईंको वेबसाइटमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सावधान रहनुहोस्।
पेशेवर र प्रीमियम WordPress थिमहरूको विपक्ष
प्रिमियम थिमहरू सित्तैंमा अधिक फाइदा भनेको उनीहरू समर्पित समर्थनको साथ आउँदछन्। तिनीहरूले खरीदमा एक-समय शुल्क लगाउँछन्, तर प्रयोगकर्ताले स्थापना गर्न चाहेको साइटहरूको संख्याको आधारमा यो परिवर्तन हुन सक्दछ। प्रिमियम थिमहरूले नियमित अपडेटहरू प्राप्त गर्दछन् र अधिक सुरक्षित छन्। तिनीहरू कहिलेकाँही फुलेको हुन्छ किनकि त्यहाँ अधिक सुविधाहरू जारी गर्न सधैं हतार हुन्छ जहाँ सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई फाइदा हुँदैन।
एकल उद्देश्य र बहुउद्देशीय वर्डप्रेस थिम बीच भिन्नता
एक नि: शुल्क र प्रीमियम WordPress विषयवस्तु बीच छनौट तपाईको हेममा संकुचनतर्फ मात्र एक चरण मात्र हो। अर्को, तपाइँले निर्णय गर्नु पर्छ कि तपाइँको वेबसाइटलाई एकल उद्देश्य विषयवस्तु वा बहुउद्देश्यीय चाहिन्छ।
एकल उद्देश्य वर्डप्रेस थिमहरूको पेशेवर र विपत्ति
एकल उद्देश्य विषयवस्तुहरू एक वेबसाइटको विशेष उपसेट लक्षित गर्दछ। उदाहरण को लागी, यो एक प्रकारको साइट जस्तै ब्ल्ग, वा कुनै विशेष उद्योग हुन सक्छ। ती प्रयोगकर्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ कि तिनीहरूले 'bespoke' अन्त उत्पादन प्रदान गर्दछन् र बहुउद्देशीय विषयवस्तुहरू भन्दा सस्ता हुन्छन्। तिनीहरूको उपयोगमा सीमितताका साथ, तपाईं उच्च गुणस्तरको समर्थन आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
थिम सीमितता पनि साइट लचिलोपन समर्थन गर्दैन। यसको मतलब यो हो कि यदि भविष्यमा तपाईलाई आफ्नो साइट विकसित भएको जस्तो लाग्छ भने, त्यसोभए तपाईले केहि नयाँ खोज्नु पर्ने हुन्छ किनभने एकल उद्देश्य विषयवस्तुले आवश्यक गर्दैन।
पेशेवर र बहुउद्देशीय WordPress विषयवस्तुहरूको विपक्ष
एक बहुउद्देशीय विषयवस्तु एकल विषयवस्तु हो जुन धेरै बिभिन्न उपकरणहरू र कार्यहरूसँग मार्केट सेयर अधिकतममा लक्षित गर्दछ। यी थिमहरूको पूर्व-निर्मित लेआउट र प्रजातिहरूको एक विस्तृत श्रृंखला र सुविधाहरूको भरपर्दो र बन्डल गरिएको WordPress प्लगइनहरू छन्। संयोजनले सम्भव बनाउँदछ कुनै पनि वेबसाइटलाई चाहिएको कुनै पनि मानकमा निर्माण गर्न। केवल अपवादहरू ती साइटहरू हुन् जुन उच्च-स्तरको कार्यक्षमता आवश्यकताको साथ। यदि तपाईं एक उच्च-गुणवत्ता बहुउद्देशीय विषयवस्तु चयन गर्नुभयो भने, तपाईंले भविष्यमा अर्को विषयवस्तु कहिले पनि किन्नु पर्दैन। बहुउद्देशीय विषयवस्तुहरू ब्लोटिंग फिचरको बढी जोखिममा छन् र विशेष आवश्यकताहरूको लागि उत्तम सूट होइन।
सहि थिम छनौटको लागि मापदण्ड
१. बजेट: नि: शुल्क विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग खर्च गर्न पैसा छैन भने। अन्यथा, गुणस्तरमा खर्च गर्नाले भविष्यमा तपाईंलाई ठूलो फाइदा पुग्न सक्छ।
२ तपाई के निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? एकल उद्देश्य विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई वेबसाइटको प्रकार थाहा छ जुन तपाईं विकास गर्न चाहानुहुन्छ, आवश्यक सुविधाहरूको बारे निश्चित हुनुहुन्छ, र विश्वास गर्नुहोस् कि यी आवश्यकताहरू कुनै पनि समयमा चाँडै परिवर्तन हुनेछैन। यदि तपाईं अतुलनीय कार्यक्षमता र लचिलोपनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, बहुउद्देशीय विषयवस्तु तपाईंको उत्तम शर्त हो।
केहि ठाँउहरू जहाँ तपाई विषयवस्तुहरूको लागि खोजी सुरू गर्न सक्नुहुनेछ WordPress.org र ThemeForest। नि: शुल्क विषयवस्तु WordPress.org मा विशेष छन्, तर तपाईं अतिरिक्त प्रिमियम थिम खोजीको लागि पनि थीमइसिल, हीरोमिस, वा निम्बस थिमहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
WordPress विषयवस्तुहरूको प्रशस्तताको समस्याको बावजुद, तपाईंको लागि सही छनौट गर्दा तपाईंको बजेट फिट हुन्छ र त्यसपछि तपाईंको वेबसाइटलाई कुन कुरा सूट गर्दछ।